Fizahan-tany Guyana hamorona ny Green Guide's Guide to Guyana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Guyana » Fizahan-tany Guyana hamorona ny Green Guide's Guide to Guyana
Manantena ny GTA fa ny Green Green's Guide to Guyana dia hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny toerana iray amin'ireo mpihaino kendreny voalohany
GTA dia nanangana ny Green Travel's Guide ho an'i Guyana amin'ny ezaka fampisehoana ny tolotra fizahan-tany tsy manam-paharoa
Green Traveler dia hanavao ny torolàlana ary hanampy endri-javatra fanampiny mba hahazoana antoka fa manome ny fampahalalana vaovao indrindra ho an'ny mpandeha izany
Ity torolàlana ity dia fitaovana azo ampiharina ho an'ireo mpandeha izay mikasa ny diany miandry any Guyana
The Manampahefana misahana ny fizahan-tany any Guyana (GTA) dia niara-niasa tamin'ireo manam-pahaizana momba ny dia ara-tontolo iainana anglisy, Green Traveler, hamorona ny Green Travel's Guide to Guyana.
Miaraka amin'ny firoboroboan'ny mpizahatany manerantany ny fiantraikan'izy ireo amin'ny toeran-tany notsidihiny - rehefa nahita ny tombony azo avy amin'ny tontolo iainana noho ny fihenan'ny asan'ny olombelona nandritra ny areti-mandringana - ny GTA dia nanangana ny Green Guide's Guide to Guyana amin'ny ezaka hanehoana ny fizahantany tsy manam-paharoa manolotra sy manoro hevitra ireo mpandeha amin'ny fomba hitsidihana am-pahamendrehana, mamela ny vokany tsara eo amin'ny toerana haleha.
Mpanorina Green Travelman, mpanao gazety fitsangatsanganana nahazo loka ary manam-pahaizana momba ny fizahan-tany maharitra, Richard Hammond, dia niara-niasa tamin'ny mpikambana ao amin'ny GTA mba hamorona ny Green Travel's Guide to Guyana miaraka amin'ny torolàlana fanombohana voalohany misy ny sary vita amin'ny beso, horonantsary fampidirana fampidirana, fampahalalana momba ny toerana hijanonana , inona no tokony hatao sy ny fomba fitetezana andraikitra, ary ny sary. Green Travel dia hanavao ny torolàlana ary hanampy endri-javatra fanampiny mba hahazoana antoka fa manome ny vaovao farany sy mifandraika amin'izany ho an'ny mpandeha izy.
Guyana dia toerana iray efa niorina teo amin'ny sehatra fizahan-tany iraisam-pirenena noho ny ezaka niarahany miasa mba hitantanana maharitra ilay toerana amin'ny alàlan'ny paikady iray izay ahitàna vondrom-piarahamonina vazimba teratany mitantana sy manana ny tetikasan'izy ireo manokana momba ny fizahantany ara-tontolo iainana any Guyana. Ny vola azo rehetra amin'ny alàlan'ireto tetikasa ireto dia averina hampiasaina indray amin'ny fiaraha-monina sy ny ezaka fiarovana mba hiarovana ny tanin-drazana izay nametrahana azy ireo. Guyana dia nahazo mari-pankasitrahana iraisam-pirenena marobe mankasitraka ny fizahan-tany fizahan-tany maitso ao aminy ao anatin'izany ny Destination Stewardship Award avy amin'ny Caribbean Tourism Organization (CTO), World # 1 "Best in Ecotourism" ary "Best in Sustainable Tourism" avy amin'ny Latin American Travel Association ( LATA) mari-pankasitrahana.
Manantena ny GTA fa ny Green Green's Guide to Guyana dia hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny toerana iray amin'ireo mpihaino kendrena indrindra, mpizahatany eco, sady manome fitaovana azo ampiharina ho an'ireo mpandeha mikasa ny diany miandry any Guyana ihany koa.